Ko Kyue . 13 hours ago
Ko Kyue . 15 hours ago
ပရီးမီးယားလိဂ် ရွှေဖိနပ်ဆုကို ဘယ်ကစားသမားဆွတ်ခူးနိုင်မလဲ (၂)
ပရီးမီးယားလိဂ် ရွှေဖိနပ်ဆုကို ဘယ်ကစားသမားဆွတ်ခူးနိုင်မလဲ (၁)
နိုင်ငံတကာ သွင်းဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ ကစားသမားများ (၂)
ကလပ်ထက် နိုင်ငံအသင်းမှာ အစွမ်းပြနိုင်ကြတဲ့ ကစားသမားများ (၂)
by Ko Kyue .7days ago
ကလပ်ထက် နိုင်ငံအသင်းမှာ အစွမ်းပြနိုင်ကြတဲ့ ကစားသမားများ (၁)
ကြိုးစားမှု အပြည့်နဲ့သာ ပေးဆပ်နိုင်ကြပါစေ
by Ko Kyue .2weeks ago
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ရဲ့Winners နဲ့ Losers များ